Cudurka Korona ee aafada: Tani ayaa hadda shaqeynaysa - Krisinformation.se
TB27 Detta gäller just nu So
Waxaad halkan ka heleysaa waxyaalaha mamnuuca ah, talooyinka iyo talobixinada hadda shaqeynaysa cudurka aafada ah dartiis oo la soo koobay. Waxaad xitaa sidoo kale helaysaa linkiyada aad macluumaad ka sii faahfaahsan/qotodheer ka helayso. Waxaanu waxyaalaha la soo koobay ka soo dooranay talooyinka iyo talobixinada adiga shakhsi ahaan ku saameynaaya.
Uppdaterades 13 sep 2021 17:35
Xadidaadaha iyo mamnuucida sharcigu uu dhigayo
Baaxada isku imaadyada/kulamada dadweynaha iyo munaasibadaha.
Inta qof ee ka qeybqaadan karta isku imaadyada/kulamada dadweynaha iyo munaasibadaha waxay ku xiran tahay haddii uu isku imaatinku ka dhacaayo gudaha ama dibedda iyo haddii ka qeybqaateyaashu ay leeyihiin kuraas loo qoondeeyey:
Dhacdooyinka gudaha lagu qabanaayo ee aan kuraasta lagu fadhiisto laheyn: 50 ka qeybqaate
Dhacdooyinka gudaha lagu qabanaayo ee kuraasta lagu fadhiisto leh: 300 ka qeybqaate. Dadka wada socdaa waa inay awoodaan inay masaafad ugu yaraan hal mitir ah dhinac dhinac iyo gadaal gadaal ka fogaan karaan dadka kale ee la socda. Dad kasta oo wada socdaa waa inay ugu badnaan siddeed qof ka koobnaadaan.
Dhacdooyinka dibada lagu qabanaayo ee aan kuraasta lagu fadhiisto laheyn: 600 ka qeybqaate
Dhacdooyinka dibada lagu qabanaayo ee kuraasta lagu fadhiisto leh: 3000 ka qeybqaate. Dadka wada socdaa waa inay awoodaan inay masaafad ugu yaraan hal mitir ah dhinac dhinac iyo gadaal gadaal ka fogaan karaan dadka kale ee la socda. Dad kasta oo wada socdaa waa inay ugu badnaan siddeed qof ka koobnaadaan.
Orordka jimicsiga: 900 ka qeybqaate
Waa inuu aasku marwalba lahaado 20 ka qeybqaate iyadoo aan la xisaabineynin inta mitir laba jibaar. Haddii dad badani ay ka qeybqaadanayaan ayay taasi ku xiran tahay haddii aasku uu ka dhacaayo gudaha ama dibedda guri iyo haddii ka qeybqaateyaashu ay leeyihiin kuraas loo qoondeeyey. Tusaale ahaan ayaa aas lagu qabanaayo guri gudihiisa oo leh kuraas loo qoondeeyey uu yeelan karaa 300 oo ka qeybqaate.
Munaasibadaha gaarka ah ee lookaalada la kireystay ka dhacaaya: 50 qof.
Haddii uu qofka qabanqaabinayaa booska uu kala qeybqeybiyo ayay xadeynta ka qeybqaateyaashu qeyb kasta khuseysaa.
Wax dheeraad ah oo ku saabsan tirada ka qeybqaate ee la isku ogol yahay isku imaatinnada kala duduwan Soo koobitaanka Folkhälsomyndigheten. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Ka akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan waxyaalaha khuseeya isku imaadyada/kulamada dadweynaha iyo munaasibadaha bogga internetka ee Booliiska. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Waa inay qaadaan tallaabooyin loogaga hortagaayo faafitaanka infegshanka. Waxa kuwaas ka mid ah in wax ka badan sideed qof aanay isla miis wada fariisan.
Soo gelitaanka Iswiidhan
Mamnuucid soo gelitaanka ayaa saaran safarada aan muhiimka aheyn ee Iswiidhan loogaga imanaayo wadamada Midowga Yurub/EES ka baxsan badankooda. Waxaanay mamnuucidu khuseynin muwaadiniinta Iswiidhishka ah ama muwaadiniinta wadan kale oo Midowga Yurub/EES ka socda iyo sidoo kale muwaadiniinta ka yimid dhowr waddan oo ka reeban. Muwaadiniinta Iswidhishka ah iyo muwaadiniinta wadamada kale ee ka diiwaan gashan Iswiidhan ayaa had iyo jeer leh xuquuqda ay Iswiidhan ugu soo safrayaan.
Wax dheeraad ah ka akhriso bogga Safarada wadanka dibadiisa halkaas oo aad sidoo kale ka heli doonto macluumaad ku saabsan kuwa ay yihiin wadamada laga reebay xayiraadda soo gelitaanka iyo waxyaalaha ee ka reeban kuwa ay yihiin.
Taloda iyo tilmaamaha
Qof kasta oo Iswiidhan jooga waa inuu raaco taloda qaranka ee ku aadan tusaale ahaan in guriga la joogo haddii aad calaamado leedahay, masaafad u jirsato oo aad guriga ku shaqeyso.
Talooyinkaas waa inaad raacdo
Haddii lagu tallaalay
Laba toddobaad ka dib marka dooska labaad la qaato ayaad ka bixi kartaa guriga xitaa haddii qof kale oo qoyska ka mid ahi uu Covid-19 qabo.
Laakiin waa in dadka la tallaalay ay sideeda kale raacaan talooyinka aasaasiga ah ee ku saabsan in guriga la joogo haddii la jiran yahay, gacmaha la dhaqo iyo in masaafad la isku jirsado.
Waxay Hay'ada Caafimaadka Bulshada qiyaaseysaa in waxbarashada iyadoo goobta lookaalada dusgiga dhexdiisa la joogo laga qaato ay shaqeynayso guud ahaan xiliga deyrta 2021 dhexdiisa. Laakiin waxa wali muhiim sii ah inay jiraan tallaabooyin kahortag ah si loogu yareeyo halista faafitaanka cudurka.
Waxa jiri karta kala duwanaansho gobol ahaaneed oo ku saabsan sida waxbarashada loo sameynaayo maadaama oo ay xaalada infegshanka ee goboladu kala duduwanaan karto. Wax dheeraad ah oo waxa shaqeynaaya ku sabsan ka akhri adiga gobolkaaga. (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Wax dheeraad ah ka akhri bogga Dugsiyada iyo daryeelka carruurta.
Guriga ku shaqee illaa intaad karto.
Loo shaqeeyahaaga kala heshii inaad guriga ku shaqayso marka ay taasi suurtogal tahay.
Haddii aad ku qasbanaato inaad shaqada aado waa inaad haddii ay suurtogal tahay aad xiliyada shaqada ugu qorsheyso si aad saxmad/ciriiri badan ee gaadiidka dadweynaha iyo goobaha shaqada iskaga ilaaliso.
Macluumaadka Hay'ada Caafimaadka Bulshada ee ku saabsan guri ku shaqeynta (boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Ugu safar habka ugu suurtogalsan ee aan fayruska loogu kala qaadeynin.
Iska ilaali gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka dadweynaha ka dhexeeya ee noocyada kale ah ee aan tigidh kursi lagu xajisto/qabsado la iibsan karin.
Hubi inaad isku karantiimeyn karto meesha aad u safreyso ama aad guriga aadi karto adiga oo aan dadka kale qaadsiineynin haddii aad calaamado covid-19 ah isku aragto.
Haddii aad wadanka dibadiisa soo joogtey
Waxay Hay'ada Caafimaadka Bulshadu soo jeedinaysaa in qofka ka soo safraaya waddan ka baxsan wadamada Waqooyiga Yurub (Norden) uu tijaabada PCR ka iska qaado markuu Iswiidhan yimaado. Waxay taasi khuseysaa xitaa haddii aanad calaamado lahayn Waxaanay talobixintu khuseynin carruurta lix jir ka yar ama dadka tallaalka laba toddobaad hortood wada dhameystay. Waxaanay taasi sidoo kale khuseynin qofka lixdii bilood ee la soo dhaafay uu ku dhacay/qaaday covid-19.
Wax dheeraad ah ka akhri bogga internetka ee Hay'ada Caafimaadka Bulshada.(boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)
Dadka soo joogay wadamada ka baxsan Waqooyiga Yurub waa inay sidoo kale taxaddir dheeraad ah oo la macaamilka dadka ah yeeshaan tusaale ahaan inaanay kooxaha khatarta ugu jira la kulmin.
Wax dheeraad ah ka akhri safarada wadanka dibadiisa ah.
Waa inay waxqabadyadu qaadaan tillaabooyinka gaarka ah ee xakameynta infegshanka si faafitaanka covid-19 la iskaga ilaaliyo, sida laga soo xigtey talobixinta guud ee Hay'adda Caafimaadka Bulshada. Waxay tusaale ahaan noqon kartaan in masaafad dhulka lagu calaamadeeyo, lagu sameeyo /beego saacadaha furitaanka ama alaabta/qalabka guryaha si la iskaga ilaaliyo saxmad/ciriiri badan.
Wax dheeraad ah ka akhri bogga internetka ee Hay'adda Caafimaadka Bulshada.(Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)